Raharaha Danil Radjan: “Tsy mazava ny fanapahan-kevitry ny fitsarana” hoy ny mpisolo vava ny fianakaviana – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:28
Maro mpanaraka ity raharaha nahafaty an’i Danil Radjan ity.
Accueil/Trangam-piaraha-monina/Raharaha Danil Radjan: “Tsy mazava ny fanapahan-kevitry ny fitsarana” hoy ny mpisolo vava ny fianakaviana
Raharaha Danil Radjan: “Tsy mazava ny fanapahan-kevitry ny fitsarana” hoy ny mpisolo vava ny fianakaviana
Omaly no nametraka ny fanohanana teny anivon’ny mpitsara mpanao famotorana ny mpisolovavan’ny fianakavian’i Danil Radjan, ilay karana nisy namono teny Ivandry La City, nanolona ny didim-pitsarana nanome fahafahana vonjimaika sy eo ambany andrimason’ny fitsarana ny lehiben’ny CPS, raha nalefa eny Tsiafahy ireo « agents » telo lahy mpiasany.
Yves Samoelijaona 1 octobre 2020
Nilaza ny mpisolovava, Miadana Ratsimba fa nolavin’ny fitsarana ny fanohanan’izy ireo iny didy milaza fa atao andriamason’ny fitsarana iny i Lionnel Lelièvre. « Na teo aza ny porofo rehetra nentin’ny sampana heloka bevava, navotsotry ny fitsarana na dia hoe eo ambany andrimason’ny fitsarana aza izy. Ny « caméra de surveillance » izay nanamarina fa teo amin’ny toerana nitrangan’ny famonoana izy. Mbola niaiky ihany koa ireo telo lahy « agents » fa teny an-toerana izy io », hoy ny fanazavana.
Ireo telo lahy any Tsiafahy moa samy efa niaiky ny heloka nataony ary nitazona ilay vazaha, ary samy hita tao anatin’ny sary tahirin’ny « caméra de surveillance » izy efatra ireo. Mbola nanamafy izany koa ny resaka an-telefaonina nataon’izy efatra voarohirohy rehefa nanaovan’ny mpanao famotorana fandihadiana lalina. Mbola tratra tany amin’ireo voarohirohy ihany koa ny moto nampiasana nandritra ny famonoana.
«Tsy mazava ny fapahan-kevitry ny fitsarana manolona ny famonoana an’i Danil Radjan. Nahoana ny olona iray anisan’ny voarohirohy no nahazo fahafahana raha any am-ponja ny mpiasany telo lahy ? Tsy hijanona ny fianakaviana raha tsy tanteraka ny fahamarinana. Tsy azo atao na inona na inona ilay vazaha io na eo aza ny raharaha maro efa nahakasika azy ? », hoy ihany ny mpisolovava.
Efa hatramin’ny talata teo no nataon’ny haino aman-jery resaka ny momba ity fanapahan-kevitry ny fitsarana ity. Ilay vazaha izay afaka mody any an-tranony, ary manao sinoa fotsiny ihany isanandro hanamarinana fa tsy nitsoaka izy. Tsy mahazo mivoaka an’Antananarivo sns, raha efa telo andro sy efatra alina no tany Tsiafahy ireo malagasy mpiasany.
Raharaha maromaro mila arahina akaiky
Mampametra-panontaniana tokoa ny zava-nitranga ka nahatonga ilay vazaha tsy naiditra am-ponja vonjimaika niaraka tamin’ireo Malagasy miasa ao aminy, kanefa ireo nitazona azy io. Tsy misy mahalala izay zava-niseho tao anatin’ny fakana am-bavany nataon’ny mpitsara, saingy mampisy ahiahy ihany izany.
Misy toe-draharaha maromaro mila arahin’ny minisiteran’ny fitsarana maso akaiky. Tsy misy afaka mitsabaka amin’ny raharaham-pitsarana saingy kosa ireo raharaha tato ho ato mahakasika azy ireo no mahalasa ny saina. Eo ohatra ny resaka Kidnapping izay nampanontany tena ny rehetra ny nahazoan’ireo olona roa LP izay voarohirohy tamin’izany ka nitazonana azy ireo teny Tsiafahy. Toe-javatra izay mifanohitra tanteraka tamin’ny volazan’ny SEG, ny Jly Ravalomanana momba ny raharaha kidnapping izay nanambara fa na maty na voasambotra tsy mivoaka intsony ireo tratra amin’izany. Andrasana ny tohin’ny raharaha.
DORO TANETY TAO MALAIMBANDY: Lehilahy iray nosamborin’ny Zandary
RAY NIKAPOKA AN-JANANY: Voaheloka higadra telo taona sazy mihantona, miampy lamandy iray tapitrisa
RAHARAHA AMPANIHY : Novangian’ny fianakaviamben’ny Zandarimaria ireo naratra
SERANAM-PIARAMANIDINA IVATO: Sarona ny vola 28 775 Euros nokasaina haondrana an-tsokosoko